Nitaraina ilay vehivavy mpikambana ao amin’ny Kongresy Hondiorana fa nosakanana tamin’ny fivoriana virtoaly izy · Global Voices teny Malagasy
Nahatonga fiahiahiana momba ny sivana ao anatin'ny fihibohana ilay fanambarana.
Voadika ny 22 Mey 2020 5:16 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, русский, Deutsch, English
Sary nataon'n'ny Global Voices, nanehoana ilay vehivavy mpikambana ao amin'ny Kongresy Doris Gutierrez sy ny pikatsariny tao amin'ny Zoom.
Ao anaty fihibohana sy ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina i Honduras nanomboka ny 16 Marsa ho fampihisarana ny fihanaky ny COVID-19. Nanery ny Kongresy hanao ny fivoriana parlemantera amin'ny endrika virtoaly izany. Na izany aza, matahotra ny sasany fa mety hanimba ny dingana ara-demaokratika noho ny tsy fahombiazana tsotra izao na noho ny teti-dratsy efa voahomana ny fampiasana ny teknolojia.
Tamin'ny 24 Aprily, nampanantsoina hanao fivoriana virtoaly tamin'ny alàlan'ny Zoom ny antenimiera mpanao lalàna mba hiresaka olana maromaro mifandraika amin'ny COVID-19, anisan'izany ny fankatoavana ireo findramam-bola vaovao any amin'ny Banky Iraisam-pirenena.
Nilaza ilay vehivavy mpikambana ao amin'ny Kongresy Doris Gutierrez, avy amin'ny (PINU) antokom-piraisankina sy fanavaozana, afovoany-ankavia, izay nanakiana ny governemanta ankehitriny tamin'ny fanasarahana ny volavolam-pandaniam-bolam-panjakana, fa “noroahina” izy taorian'ny nidirany tamin'ny fivoriana virtoaly.
Tao amin'ny Twitter, nohazavainy fa niniana natao ny fandroahana azy:
“Gaga aho tamin'ny fihetsika natao tamin'ny mpanomponao ara-panjakana, izay niniana nanesorana ahy tamin'ny fivoriana virtoaly nataon'ny Kongresy nasionaly. Nandritra izany fotoana izany, nahatsiaro ho tezitra aho noho ny fanavakavahana izay nihatra tamiko. Saingy… tsy hampangina ahy izy ireo. ”
Mampiseho ny efijerin'ny findainy sy ny mailaka azony ity horonantsary ity niaraka tamin'ny hafatra hoe “Araka ny torolàlana avy amin'ny Filoha Mauricio Oliva dia asaina ianao hanatrika ny Fivoriana Virtoaly Voalohany.” Atoa Oliva no Filohan'ny Kongresy ao Honduras, mitovy amin'ny Mpitondratenin'ny Antenimiera any Etazonia.
Ahitana ilay vehivavy mpikamban'ny kongresy Doris Gutierrez niezaka niditra tamin'ilay fivoriana virtoaly ny lahatsary mampiseho ny pikantsary ary avy eo nampiseho ny hafatra toy izao: “Mialà amin'ny fivoriana / Tsy afaka handray anjara amin'ity fivoriana ity intsony ianao satria nesorin'ny mpampiantrano.”
Tsy mbola fantatra raha afaka niditra amin'ny fivoriana izy ireo any aoriana na nofoanana ny fivoriana.
Doris Gutierrez, mpisolovava lasa vehivavy mpikambana ao amin'ny Kongresy no solontenan'ny antoko mpanohitra afovoany ankavia Innovación y Unidad (Antoko Fanavaozana sy Firaisankina) nanomboka tamin'ny taona 2014. Mihevitra ny tenany ho sosialista izy na dia efa tao anatin'ny antoko hafa aza izy teo aloha, akaikin'ny fotokevitry ny Fiangonana Katolika amin'ny fampianarana ara-tsosialy sy ny fiahiana ny rariny ara-tsosialy. Fantatra amin'ny “filazàny izay ao an-tsainy” izy araka ny teny filamatry ny ny fampielezan-keviny hoe “cero casacas”, izay adika ara-bakiteny hoe “tsy misy lainga”, na “tsy misy BS.”
Namaly ny filazan'ilay vehivavy mpikambana kongresy Gutierrez ny mpisera Twitter iray fa natao “hamitahana” ny olona hieritreritra izany fa nalan'ny mpampiantrano tao amin'ny [fifanakalozan-kevitra] izy satria tsy tiany hahafantatra zavatra, “ary tokony nofoanana ny fivoriana” satria tsy azo itokisana.” Namaly ny olona iray hafa hoe : “Ary izany no nahatonga azy ireo nifanaraka tamin'ny teti-bola 75 tapitrisa tapitrisa [lempiras], ireto mpangalatry ny Narco ireto.”
Tamin'ny 6 May, nandefa sioka indray i Doris Gutierrez. Tamin'ity indray mitoraka ity izy nanahy momba ilay fehezan-dalàna famaizana vaovao niteraka adihevitra tao amin'ny firenena ary hanomboka hanankery ny 10 Mey nefa tsy nanaovana fivoriana virtoaly akory mba hiadian'ny antokony hevitra.
Andro vitsy taty aoriana, noho ny fifandirana nahery vaika momba ilay fehezan-dalàna famaizana vaovao izay nolazaina fa hanamaivanana ny sazy amin'ny kolikoly sy ny fanondranana zava-mahadomelina dia nanaiky hanome fotoana bebe kokoa mba hiadiana hevitra momba ilay fehezan-dalàna famaizana vaovao izay hanankery amin'ny 25 Jona 2020 Andriamatoa Oliva .
Miarahaba ! Miahiahy izahay parlemantera ao amin'ny PINUD_HN satria tsy nisy ny filazana fa hisy ny fiantsoana fivorian'ny Antenimiera virtoaly amin'ity herinandro ity… Raha azonay tsara izany dia ATAON IZY IREO IZAY HAMPANANKERY ILAY FEHEZANDALANA FAMAIZANA IZAY FANITSAKITSAHANA NY ANDININY FAHA 188 AMINNY LALAM-PANORENANA
Ambany ny tahan'ny fahalalahana maneho hevitra, ny mangarahara ary ny demokrasia any Honduras. Any amin'ny laharana faha 146 amin'ny 180 no misy an'i Honduras ao amin'ny tondron'ny Transparency International momba ny kolikoly. Laharana faha 148 tamin'ny 180 izy amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety araka ny Reporters sans frontières, ary laharana faha 89 amin'ny 167 amin'ny laharana demokrasia Economist. Nandalo onjan'ny krizy ara-tsosialy tao anatin'ny tahan'ny fahantrana sy ny kolikoly ambony i Honduras nanomboka tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2009 nanonganana ny filoha voafidy tamin'ny fomba demokratika, Manuel Zelaya ary notohanan'ny Etazonia ankolaka taty aoriana. Tamin'ny herintaona, niampanga an'i Tony Hernández, rahalahin'ny filoha Juan Orlando Hernández sy ny lehiben'ny polisy teo aloha tao Honduras Juan Carlos Bonilla Valladares fantatra amin'ny hoe “El Tigre” tamin'ny fanondranana rongony aman-taonina nankany Etazonia ny tompon'andraikitra Amerikana. An'arivony ny olona no nandositra ny firenena .